Date My Pet » Tiavo ny alika : New Leash ny fiainana
amin'ny Claire Cook
Last nohavaozina: Oct. 21 2020 | 6 min namaky
Rahalahiko Michael Niara-nipetraka tamiko i mandra tafaverina ny fanambadiana eo amin'ny lalana.
“Tsy fantatrareo dia Molly coddle azy, Sarah,” raiko nanao hoe:. “Hanome azy fotsiny efamira telo isan'andro ary manao azo antoka fa manana starched lobaka fotsy hanaovana ny birao.”
“Raha be toy ny mandinika ny labiera tavoahangy, hanafina ny finday,” hoy Carol rahavaviko. “Aza, na inona na inona toe-javatra, aoka izy mamo dial Phoebe. Izy dia mpilalao ody amin'ny renivohitra B rehefa nanambady azy, ary izy ho mpamosavy Ho amin'ny renivohitra B rehefa mahita ny asolo toerana.”
“Nahoana no Michael maintsy mitoetra ato an-trano?” hoy Christine rahavaviko. “Manana be dia be ny trano, ary tsy misy fandikan-dalàna, saingy izany dia tsy tsara ny fomba foana ny mibodo azy.”
Taorian'ny volana, mety taona, ny miezaka ny hanao ny fanambadiana raha mbola niara-nipetraka tao an-trano izy,, Michael nanantena fa tsy maha te, raha ny tena izy, manao ny fon'i Phoebe mitombo fonder. Ka dia nifindra ka izao dia nitondra ny vavy, Annie ary Lainie, ny dingana irlandey mandihy amin'ny alarobia rehefa avy mianatra, ary nitondra azy ireo nivoaka nisakafo rehefa afaka izany,. Izy ireo ihany koa isaky ny faran'ny herinandro nandany azy.
“Ahoana kokoa araka ny hevitrao izany dia ho?” John Anderson nanontany farany. Toa izany ny antonony fanontaniana avy amin'ny olona izay efa tonga ny manan-danja hafa.
“Mandra-helo ve freezes ny lafy ratsin-javatra loatra toa?” I namaly.
Taorian'ny bumpy voalohany ka ny fifandraisana, John ary efa nizara enim-bolana ny mampiaraka sambatra. Izahay izao amin'ny ankapobeny mihazona. Nanontany tena aho hoe indraindray toy ny misasakalina raha nihazona izany andraikitra izany accrued ampy mba sambatra hevitra amin'ny alalan'ny ity. Ary no sambatra manana fiainana talantalana? Moa ve faty ny tsirambina alohan'ny afaka mikopaka afo indray tsy tapaka?
Anio alina, rahalahiko Michael, ary izaho dia voadakan'ny todika ny seza lava. Ny herinandro starched-danja ny manao akanjo fotsy amin'ny fanadiovana maina ireo kitapo draped mihoatra ny treadmill. Sam foana tsy mitondra fanatitra roa tavoahangy Adams labiera flanked tapany-nihinana fromazy ny pizza eo ambony latabatra ny kafe. Aho rahavavy.
“Nice,” Michael hoe:.
“Misaotra,” Hoy aho hoe.
Nandritra ny faran'ny herinandro, Michael sy Annie sy Lainie ary efa nisintona nidina ny tohatra efitra ambanin'ny tafo rickety taloha ka lasa amin'ny mihaza ny kilalao. Ny nieces tsy taitra loatra ny-drehetra mifandray amin'ny ny fahazazako, ary ireo indray, ary very tao ambany rihana finday lalao tsy fotoana. Toa ny rahalahy fa raha tsy izany, satria amin'izao fotoana izao dia nilalao niaraka tamin'ny kapiteny Nanompo saribakoly.
“Izy no saribakoly roa amin'ny iray, fa avo roa heny mahafinaritra!” Dia voalaza ao ny peppiest Manahaka an'i taona 1970 barotra.
Kapiteny dia Barbie ny zandriko vavy. Toy ny Doublemint ny fahazazako izay efa touted ho roa, roa, mints roa ao anatin'ny iray, kapiteny izany dikan-tena dia saribakoly roa amin'ny iray. Rehefa nahita azy voalohany, dia niseho ho mamy blond kely mpianatra amin'ny sekoly fanabeazana fototra. Fa raha Rotated ny sandriny havia indray, izy raha ny marina naniry nono tsara eo imasonareo.
Toy ny hoe tsy azo Barbie ny vatana tsy screwed ahy ampy amin'ny formative taona. Noho ny Nanompo kapiteny, Aho nandritra ny herintaona, fara fahakeliny, ny fiainana prepubescent circling ny sandriny havia aoriana toy ny iray-mitam-piadiana backstroker nandohalika aho raha afa-fandriako aho isan'alina hoe vavaka. Rehefa avy nangataka an'Andriamanitra mba hitahy Neny sy i Dada sy ny rahalahy telo sy anabavy roa ary ny ankizy mosarena any Shina, Nivavaka aho mba hahazo Boobs, lehibe kokoa noho ny rahavaviko Carol, izay zokiny ary roa taona, hampifaly an'Andriamanitra, tonga eo anatrehan'Andriamanitro-fito ambin'ny folo volana ny zandriny vavy Christine nampiseho ny.
“Isika dia tsy maintsy, isika dia tsy maintsy, dia tsy maintsy mampitombo ny bust,” Michael nilaza afa-tsy Izaho izay taona maro taty aoriana, fony izy pumped kapiteny Nanompo ny sandriny havia miakatra sy midina. Ny tratrany no niseho ka nanjavona tanteraka ny hira fotoana.
“Mandondòna izany eny,” Hoy aho hoe. Dia tonga ho an'ny saribakoly taloha.
Michael yanked izy mianaka;. “Iza iany ahy?”
“Omeo azy ho ahy,” Nivazavaza aho araka ny lunged ny kapiteny. Fahazarana taloha maty mafy sy izay rehetra, nefa tena mahavariana ny fomba ry rahalahy sy anabavy ary afaka iverenana ny fahazazany ny tenanareo ao amin'ny nanosecond.
Ny hodi-kazo mafy ahy hitsambikina. Neny Teresa, Michael ny humongous St. Bernard, izay ihany koa Niara-nipetraka tamiko mandra-Foiby malahelo azy, na mandra-helo niraikitra ny, Nanompo nisambotra kapiteny.
Michael dia nitsambikina ho ny tongony. “Neny Teresa, Mitete izany.”
Neny natao kapiteny Teresa ny sandriny havia eo ny nifiny tahaka ny nihorohoro ny lohany izy amin'ny sasany remby-famonoana fahiny izy fombafomba tsy tena nivoatra any an-dafin'i. Ny nono ny saribakoly niseho ka nanjavona isaky fa nihozongozona.
Dia nihazakazaka nankany an-dakozia, ary nalainay izay doggie Fifaliana siny. I nanondro ny taolana miendrika biscuit.
Teresa Neny niseho hanangana iray eyebrow.
Napetrako Fifaliana voalohany teo amin'ny tany, ary naka iray faharoa avy amin'ny siny.
Nomeny Nanompo kapiteny fa nihozongozona hafa.
“Fine,” Hoy aho hoe. “Fa ara-drariny fampitandremana, Aho manao ny andalana amin'ny telo.”
Nametraka Teresa Neny Nanompo kapiteny moramora teo amin'ny tany, ary nanangona ny telo nitondran'i.
“Good tovovavy,” Michael hoe:.
“Izany debatable,” Hoy aho hoe. Nalaiko ny drool rakotra saribakoly, ary nanomboka teo aho sady namafa ny Jeans. I reconsidered ary nalainay ny ny pizza napkin.
“Eto, Haka izany aho,” Michael hoe:.
I natolotra Nanompo kapiteny sy ny napkin ary plopped teo amin'ny seza lava.
Michael vita fisehoana ankapobe Nanompo kapiteny ary niverina mba rhythmically pumping ny sandriny havia.
Fantatro fa nisy antso vonjy. Fantatro ny sisterly adidy. Aho hahazo ny saina eny Rehefa lehibe teo kapiteny, dia mahazo aho ny saina eny Phoebe. Aho nanampy azy hahatakatra ny fanambadiana no mpifehy sy hanampy azy eo amin'ny fanaovana fikarohana ny fisaraham-panambadiana raha miezaka ny hitandrina ny fiantraikany eo amin'ny Annie sy Lainie ny Faran'izay kely ny. Ary avy eo aho hahita azy tsara kokoa lalao. Raha vao azoko fa squared lasa, John Anderson ary mitaingina eny aho ho any amin'ny filentehan'ny masoandro blissful miara-.
“Heveriko entana izany aho amin'ny,” Michael hoe:. “Tianao ve aho mba haka Neny Teresa avy indray ny fotoana, na azonao mahazo azy eo anoloanao mitodi-doha ho any am-pandriana?”
Teresa Neny ka nilelaka rano nitongilana kely nanakatra ny takolako. I Nisento. “Maka azy aho.”
Michael nanome mampalahelo antsasaky ny onja. “G'night, Sarah. Alina, Neny Teresa.”
Dia naka ny dingana tsy faly ny guestroom.
“Michael,” Hoy aho hoe.
Dia nihodina. Rehefa lehibe teo kapiteny i cradled amin'ny sandriny.
Dia natao ny tanako. “Omeo ahy ny saribakoly, Michael.”
Dia nipetraka teo nandritra ny fotoana kelikely, Reny Scratching Teresa tao amin'ny toerana tena vaovao toerana, tsara aoriany sofina havia. Dia nitsangana aho ka tiptoed amin'ny efitrano fandriana aho tompony taloha, izay nivadika ho aho birao ary izay itoerako niasa fanitarana sy voatahiry fanampiny zavatra noho ny efitrano fianarana.
I rummaged amin'ny alalan'ny antontan-scrapbooks eo ambany talantalana. Dia namoaka ny fampakaram-bady Album, dusted izany eny amin'ny tanana iray, natao izany ho fotoana. Nakipiko ny masoko, ary niezaka ny sary Kevin, ny vadiko taloha. Afaka conjure rehetra dia ny sary mazava ny anankiray nipetraka teo amin'ny seza iray trano fidiovana, ny lohany miafina ambadiky ny gazety, ny pataloha manodidina ny kitrokeliny, ny efitra fandroana varavarana misokatra. Nanontany tena aho raha namaky ny maraina Kevin vaovao momba ny iPad izao.
Farany, Hitako ny kahie foana aho raha mbola teo am sehatry ny fikarohana ny mampiaraka. Pejy iray ho an'ny tsirairay ny daty, laharana tampeno-voatsoaka sy ny sainam-pirenena kintana. Maro dia maro ny saina mena billowed manerana ny tampon'ny ny pejy fa nijery toy ny fivarotana any amin'ny mpivarotra fiara. George avy Hanover, izy sady niandry ny fifandraisana indray andro isam-bolana, tsy misy tady, tsy misy fanoloran-tena. Izaho Dia Mety Ho, izay nitombo ny alfalfa tsimoka. Ilay lehilahy Mitady vehivavy miampy-salantsalany, izay nandinika aho ampahany fohy, satria tiako ny fomba capitalized Woman, fa ny ankamaroany satria afaka hihinana be. Ray Santia, Saika teo aloha aho Hockey kintana efa lasa nodimandry any amin'ny. Bob Connor, ny mpianatra ny rainy aho dia tsy ho lasa nodimandry any amin'ny.
Izany dia avy tao anaty ala. Mahantra Michael. Fa raha tsy mahazo azy ao an-tranoko sy teo amin'ny fomba mifaly, talohan'ny nahafantatra izany aho, mety ho avy any indray ny tenako.
Dia naka fotoana kely Maharikoriko amin'ny eritreritra. Avy eo dia nahita ny dokambarotra manokana rahavaviko Carol nametraka ho ahy, mipetaka eo an-ivon 'ny pejy.
Voluptuous, sensuous, mahasarika sy fahafinaretana. Zara raha 40 DWF mitady olona manokana hizara starlit alina. Tsy maintsy tia alika.
Dia nitondra ny mampiaraka kahie avy amin'ny efitra fandraisam-bahiny, Tiako ny toerana tena mena pensilihazo. Dia niverina tany amin'ny oniversite vaovao-nilahatra pejy sy Tovozina ny gaoma amin'ny nifiko aho raha tweaked ny dokambarotra mba hifanaraka ny rahalahiko.
Buff, mamirapiratra, tapaka fa tsy any an-dafin'ny fanamboarana. Tsara tarehy tsy ho ela DWM ny volon-dohany rehetra mitady vehivavy manokana, izay mihaona ny vavy’ fitsipika ambony. Tsy maintsy tia alika be slobbery.
(Natonta nahazoana alalana avy amin'ny Claire Cook ny boky farany 'Tiavo alika – New Leash ny fiainana’ – boky 2 ny fivarotana ny tsara indrindra Tiavo alika andian. Afaka mijery bebe kokoa momba Claire sy ny boky ao amin'ny www.clairecook.com)
Mampiaraka Tips Fa The saro-kenatra, Olona hafahafa